Mountain Television nation's first popular and leading analytical news channel. Mountain covers all the latest news from Nepal, Political News, Science news, Social news, Sport news, Ecomony news, Business, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actores, Audio, Video, Interview and many more. धर्मको निन्दा गरेको आरोपमा जेल परेकी आसिया बीबी कारागार मुक्त – Emountain TV
धर्मको निन्दा गरेको आरोपमा जेल परेकी आसिया बीबी कारागार मुक्त
काठमाडौं, २२ कात्तिक । पाकिस्तानको सर्वोच्च अदालतले रिहाईको आदेश दिएपछि विगत आठ बर्ष देखी पाकिस्तानको कारागारमा सजाय भोग्दै आएकी ईसाइ महिला आशिया बीबी मुल्तान जेलबाट रिहा भएकी छन् ।
इस्लामलाई अपमान गरेको आरोपमा उनी कैदी जिवन व्यतित गदै आएकी थिइन् । आशियाको रिहाइका लागी लविङ गर्नेहरु खुसी भएका छन् भने कट्टरपन्थी मुस्लिमहरुले विरोध प्रदर्शन जारी नै राखेका छन् ।
इस्लाम विरुद्व बिष बमन र इस्लाम धर्मलाई अपमान गरेको आरोपमा पाकिस्तानमा कैदी जिवन व्यतित गदै आएकी इसाइ महिला आशिया बीबी ८ बर्ष पछि कैद मुक्त भएकी हुन् । आशियालाई मुल्तानको कारागारबाट रिहा गरिएको छ ।
पाकिस्तानको सर्वोच्च अदालतले उनको मृत्युदण्डको सजाय उल्टाउँदै गत साता रिहा गर्न आदेश दिएको थियो । अदालतको आदेश पछि कटट्रपन्थि मुस्लीमहरुले आशियालाई मृत्यू दण्डको सजाय दिनुपर्ने माग राख्दै सडकमा प्रदर्शन गर्दै आएका छन् ।
आशियालाई रावलपिण्डी स्थीत नुरखान एयरबेस लगेर त्यहिबाट नेदरल्याण्ड लगिएको स्रोत्रले दाबी गरेको छ । जबकी पाकिस्तान सरकारका प्रवत्ताले यसबारे कुनै टिप्पणी गर्न इन्कार गरेका छन् ।
४७ बर्षीया आशियाको रिहाइका लागी उनका पति आशिक मसीले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प, बेलायत र क्यानेडाका प्रधानमन्त्रीलाई समेत पाकिस्तानको जेलबाट रिहा गराउन आग्रह गरेका थिए ।
५ बच्चाकी आमा आशिया बीबीले छिमेकीसंग झगडा गर्दा इस्लाम धर्मलाई अपमान गरेको आरोप लागेको थियो । त्यसपछि सन् २०१० मा उनलाई दोषी ठहराइएको थियो ।
आशियाले भने आफु निर्दाेष रहेको र इस्लाम धर्मलाई अपमान नगरेको बताएकी थिइन् । तर उनको केही सिप चलेन फलस्वरुप आठ बर्षसम्म जेल जिवन बिताउनु पर्याे ।
पाकिस्तानमा कटट्रपन्थिहरुले त्यहाँको सर्वोच्च अदालतले रिहा गर्ने आदेश दिएपछि पनि सडक तताउने काम गर्दै आएका छन् । कटट्रपन्थिको विरोध प्रदर्शन पछि पाकिस्तान सरकारले कडा चुनौतीको सामना गर्दै यो मुद्दा सामसुम पार्न खोजेको छ ।
साथै हिंसात्मक प्रदर्शनहरु रोक्न आशिया बीबीलाई पाकिस्तान छाड्न नदिन आवश्यक पहल गर्ने बताएको थियो । कटट्रपन्थिहरुले आशियालाई सफाई दिने न्यायाधीसहरुलाई पनि कारवाही गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन् ।